37 Chi nwanyị ịkpụ ntutu zuru oke maka 2020 - Ịma Mma
37 Goddess Braids Ị ga -achọ n'ezie maka ụdị nchedo gị ọzọ
BRB, na -ahazi oge atọrọ.
Foto Getty; Instagram
Ọ bụrụ na ị na -achọ ụdị nchedo nke ahụ ga -eme ka ị nwee ọmarịcha mara mma na eze, braids chi nwanyị bụ ebe ọ nọ. Ọdịdị a sitere na Africa oge ochie, ebe ha nọ akara nke imepụta ihe na nka . N'ikwu eziokwu, otu ahụ guzoro na 2020, nyere ụzọ egwuregwu niile na -atọ ọchị na nke enweghị atụ ị nwere ike iyi. Mana tupu anyị abanye na nke ahụ, ntakịrị ntakịrị ihe na -egosi braids chi nwanyị Ụfọdụ braids ma ọ bụ igbe braids.
Kedu ihe bụ braids chi nwanyị?
Braids chi nwanyị bụ oke ọka. Ha buru oke ibu, bulie elu, a na -ejikọkwa ya ọnụ n'isi gị. Enwere ike ịhazi ha n'ọtụtụ ụzọ maka oge ọ bụla; ị nwere ike isi na mgbatị ahụ pụọ, rụọ ọrụ ozugbo, wee gaa ị drinksụ mmanya, niile mgbe ị na -echebe ntutu gị ma na -ele anya nke ukwuu. Ọzọ gbakwunyere? N'ihi na ha buru oke ibu, ha na -adịkarị ngwa ịwụnye karịa braids igbe ma ọ bụ ọka. Mee atụmatụ ebe ọ bụla site na nkeji 30 ruo awa ole na ole, dabere na braider gị yana etu ị siri dị mgbagwoju anya ka ụkpụrụ a dị.
Ugbu a na ị nwetala ihe ndị bụ isi, lee anya na ụfọdụ mgbanwe kachasị amasị anyị na braids chi nwanyị. Jikere maka nseta ihuenyo.
Foto Getty 1/37
Rapunzel chi nwanyị braids
Chọrọ igwu egwu ahụ n'ezie chi nwanyị na braids chi nwanyị? Gaa maka ogologo nke XXL nwere ngwụcha gbagọrọ agbagọ maka ọmarịcha ọchịchị eze.
Foto Getty 2/37
Braids chi nwanyị mara mma
Braids chi nwanyị dabara adaba maka mmemme nkịtị dịka ọ dịịrị ụbọchị niile. Nlele nke onye na -eme ihe nkiri Storm Reid na -ele anya ebe a - nke nwere akụkụ wara wara nke ọma na eriri kewara n'ubu ya - bụ ihe akaebe.
Foto Getty 3/37
Chi nwanyị Braids na obere ala
Ego ole ka anyị hụrụ ihu a na Yara Shahidi? Ka anyị gụọ ụzọ ndị ahụ: ntutu nwa ọhụrụ a kpụrụ akpụ! Ọmarịcha obere bun! Na -elekwasị anya na ndị ahụ ọla ntị! Ee, ihe niile gbasara nke a bụ izu oke.
Braids Ochie Chi nwanyị
Nri nri ndị a dị jụụ anaghị adịte aka ka ha na-abịa.
Foto Getty 5/37
Braids Chi nwanyị ihunanya
Akụkụ dị nro, nke nwere amamihe jikọtara ya na braids chi nwanyị dị iche iche na-ele anya dị ka anwansi. Weghachi eriri gị ka ọ bụrụ obere ọdụdụ dị larịị, nke na -atọ ụtọ ka ụdị ahụ wee dị ụtọ.
Halo chi nwanyị braids
Uwe ntutu na akwara na -adọkpụ na -etinye oghere ethereal na braids halo.
Foto Getty 7/37
Achịcha chi nwanyị gbara agba
Egwuregwu braid Gabrielle Union nwere anyaụfụ. Eriri ọla edo na ngwụcha agbagọ na -ele anya na ọkwa nke ọzọ.
Ọkara Afro Chi nwanyị Braids
Kedu ihe kpatara ịhọrọ n'etiti udiri eke gị na braids mgbe ị nwere ike inwe ha abụọ?
Foto Getty 9/37
Obere chi nwanyị braids
Ọmarịcha anya a na -adị n'etiti ahịrị Ụfọdụ ikpa isi na chi nwanyị braid. Ọ dị mma n'etiti ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịnwale mmiri ka ọ bụrụ ahịhịa ma ọ bụ obere braids.
Crochet Chi nwanyị Braids
Nwee elu chi nwanyị braids site na crocheting n'ụzọ zuru oke, gbagọrọ agbagọ.
Foto Getty 11/37
Chi nwanyị na -eji ntutu isi nwa agbagharị agbagharị
Ọ bụrụ na ị na -achọ igosi ntutu nwa gị, ụfọdụ braids chi nwanyị a dọghachiri azụ na bun bụ ụzọ zuru oke maka ya. Jide n'aka na ị dị nwayọọ n'akụkụ gị ma jiri njikwa ihu mmiri.
Igbe Igbe Chukwu
Tinye mgbakwunye mgbatị na braids igbe iji mee ka ha dị elu.
Foto Getty 13/37
Solange na -eji ntutu isi ya ebuli elu elu. Braids chi nwanyị a na -acha odo odo braids na shells ga -atụgharị isi n'ezie.
Foto Getty 14/37
Ngwakọta nke chi chi agwa agwa
Ọ bụ ezie na braids chi nwanyị dị egwu karịa ọka nkịtị, nke ahụ apụtaghị na ha niile ga -abụ nha. Marsai Martin na -egosi etu ị ga -esi nwee ụdị uwe a.
Chi nwanyị na -eji ponytail na -agba agba
Ọdịiche dị iche bụ naanị ihe ịtụnanya.
Foto Getty 16/37
Ọkpụkpụ ọla edo nke Blonde ọla edo
Otu n'ime ihe kacha mma gbasara braids bụ na ị nwere ike ịnwale ụcha n'emebighị ntutu gị n'ezie. Braid braid braid braid braids dị oke mma ma baa uru.
Chi nwanyị na -eji akụkụ zigzag eme ihe
Akụkụ zigzag bụ '90s nke ukwuu. Inye nri na ndọtị na -acha ọbara ọbara na -eme ka ile anya yie ihe ọchị.
Foto Getty 18/37
Brak Sunkissed God braids
Kpoo akwa na -acha ọbara ọbara na ọbara ọbara maka anya na -enwu gbaa na anwụ. Ego ma ọ bụrụ na i jikọta etemeete anya gị na braids gị.
Ọ bụrụ na i chere na ụkpụrụ a dị jụụ, chere ruo mgbe ị kwụsịrị lee usoro ịkpa isi n'omume maka pony a dị elu. Jaw-idobe!
Ihe mkpuchi nke chi nwanyị a kpara akpa
Usoro ndị a dị mgbagwoju anya na -ewe oge karịa ime? Ee. Ma, hà bara uru? Dị ka ị pụrụ ịhụ, 1,000%.
Braids chi nwanyị dị gịrịgịrị nke Tinashe dị mma ma ọ bụrụ na ị na -achọ ụdị nke na -adịghị mkpa ntutu agbakwunyere. Idebe ọkụ ntutu nke na-enye nri pụtara na ị ga-amatatụ obere akụkụ gị siri ike.
Braids Chi nwanyị agwakọtara
Oghere ndị ọzọ na -adịghị mma na ndị dị gịrịgịrị maka ịrịọ arịrịọ mara mma.
Foto Getty 23/37
Braids nke Super-Sleek God
Braids chi nwanyị mara mma na -elekwasị anya n'ihu gị. Ntutu isi Kelly Rowland na-enwu enwu ma na-adịchaghị mma n'otu oge ahụ.
mgbochi anwụrụ ọkụ maka iko cvs
Instagram / @fro __. na 24/37
Chi nwanyị mara mma nke nwere obere ala
Achịcha dị ala na -ewu ewu mgbe niile. Meekwa ntutu nwa gị aka, ma ọ bụrụ na ọ na -adị gị mma.
Braids Red Chi nwanyị
Braids ndị a na -enwu gbaa ma na -atọ ụtọ. Ọmarịcha chaplet na agba ọla edo na -emeju anya.
Chi nwanyị braids na afụ afụ
Ọ dịghị ihe na -eti mkpu n'oge ọkọchị dị ka ụyọkọ nke ntutu isi neon.
Chi nwanyị na -eji ihe eji achọ mma na ịnyịnya ịnyịnya
Amaghị m ihe akụkụ kacha amasị m nke edozi isi a bụ. Site na curls na -enwu enwu, na usoro ikpa isi, na ọla, anya a nwere ihe niile.
Egwu Chineke Ederede ederede
Echefu gelling ala ọ bụla ikpeazụ frizz. Ka mkpuchi gị gbapụ braids gị, na -enye gị ọmarịcha mara mma.
Foto Getty 29/37
Chi nwanyị na -eji nkịrịka isi na ịnyịnya gbara agba
Shell na chaplet na ntutu gị ekwesịghị ịbụ naanị maka ezumike osimiri. Dị ka Kerry Washington na -egosi, ha na -arụkwa ọrụ maka oge eji ejiji.
Chi nwanyị eji akwa isi
Braids ndị a bụ ọrụ nka. Mpempe akwụkwọ mpịachi a kpara akpa ga -enye gị ihe nkiri ahụ.
Chi nwaanyị agbagọ
Chi nwanyị na -eme mkpọtụ, mana mee ka ha gbagọrọ agbagọ kama. Styledị a na -adịghị mma na -adị ngwa ịwụnye ma na -enye glam, boho vibe.
Chi nwanyị na -eji ogologo pony nwere ogologo braided
Braids chi nwanyị gbakwunyere pony dị elu, nke a kpara akpa bụ nrọ ka a na -eme.
Braids God nwere ụda abụọ
Kedu onye kwuru na braids gị kwesịrị ịbụ naanị otu agba? Tinye obere ntutu na ntutu isi gị ma ọ bụrụ na ị na -achọ mgbanwe na -adịghị agbanwe agbanwe.
Nke a mara mma riff na chi nwanyị braids na -adị ka ọ dị mma karịa nwere akwa ọzọ ma ọ bụ akwa abụọ a kpara akpa.
Chi nwanyị nwere ọkara nwere braids nwere ihu wara wara
Uru nke inwe braids chi dị ka Jordyn Woods na -eme ebe a? Ọ na -adọrọ uche niile n'ihu gị.
Chi nwanyị ejiri pigtails mee ihe
Mma nke chi braids bụ na ị nwere ike ịhazi ha n'ọtụtụ ụzọ. Kama iyi ha ozugbo n'azụ gị, ị nwere ike kegide ha ka ha bụrụ ihe na -atọ ọchị.
Foto Getty 37/37
Braids Chi nwanyị dị nro
Ọ bụghị ụdị ọ bụla a kpara akpa ka a ga -ejikọ na chi. Chi nwanyị Jada Pinkett Smith nwere ntutu ntutu dị nkọ na-atọgbọ azụ mana ọ ka na-eyi uwe.
3 braids n'azụ
esi egbutu wispy bangs
nsacha ihu kacha mma maka ụmụ nwanyị gafere afọ 50